Ma Tin Tin Lae
💖နေ့လည်းလိမ်း 💖ညလည်းလိမ်း 💖မိတ်ကပ်အောက်ခံအနေနဲ့လည်းလိမ်း 💖သနပ်ခါးနဲ့တွဲပြီးတော့လည်းလိမ်း ဘယ်လိုပဲလိမ်းလိမ်း ဖြူ၀င်းပြီး နုပျိုလှပမှုကို ပေးစွမ်းမယ့် မရှိမဖြစ် 🐌Snail Wish🐌 !!! #SnailWishWhiteningCream #TheBestQuality
Ko Htun Phyo Aung
အသားျဖဴ အသားလွ ႏုပ်ိဳလွပေစမယ့္ ျဖည့္စြက္ အာဟာရ . . . New Skiin Skin Reborn Solution. New Skiin Skin Reborn Solution အလုံး ၃၀ ပါတစ္ဘူး ၂၉၅၀၀ က်ပ္. Ph09425343930/09692877971 #NewSkiin #SkinRebornSolution
Ma Thae Su Win
Better Skin သဘာဝ ကော်ဖီ မန်ကျည်း နနွင်း ဆပ်ပြာ ကို ဘယ်သူတွေသုံးသင့်တာလဲ! မိမိအသားအရေကိုဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းလိုသော အမျိုးသား ၊အမျိုးသမီး တိုင်းအသုံးပြုသင့်သော အရည်အသွေးမြင့် နေ့စဉ်သုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသားအရေမညီမညာသူများအမဲစက် တင်းတိပ်နှင့်ဝက်ခြံများ ၊အသားမာများ ၊အသားအရေအမဲကွက်များနှင့်ဂျွတ်များကြောင့် စိတ်ညစ်ရသူများအတွက် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်... Better Skin သဘာ၀ ‌ကော်ဖီ မန်ကျည်း နနွင်း ဆပ်ပြာ 120g တစ်တုံး ၄၅၀၀ ကျပ် 👨‍💻09 962560086 #BetterSkin #TamarindTumericCoffeeScrubSoap
Ma Thu Thu Aung
ခရီးထြက္ေတာ့ အျပင္မွာ အရမ္းပူတယ္ေလ။ Nano spray ေလးနဲ႔ ေရဓာတ္ျဖည့္ေပးမွ ေအးၿပီး ေနရတာ အဆင္ေျပေတာ့တယ္
Ma Khin Ma Ma Lwin
Ma Thida Aung
Nano Brush လေးသုံးပြီး မျက်နှာသစ်ကြမယ် ချစ်တို့ရေ။
Ma Yadanar Soe Aung
New Skin ဆိုတဲ့အထုပ်လေးကလေ Snail Wish ကိုဗူးကြီးဝယ်လိမ်းပီး မကြိုက်မှာစိုးလို့ အထုပ်သေးအနေနဲ့ စမ်းလိမ်းရအောင်ထုတ်ပေးထားတာပါနော် စမ်းလိမ်းကြည့်တဲ့သူတိုင်းကလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ပီး ဘူးကိုပြောင်းလိမ်းကြသူများပါတယ် အမဲစက်တို့ တင်းတိပ်တို့ဆိုတာတွေက New Skin တစ်ထုပ်လေးစမ်းလိမ်း ကြည့်ပီး ပျောက်တဲ့အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူးနော် Snail ဗူးကို စွဲလိမ်းပေးမှ တဖြေးဖြေးပါးပီး ပျောက်သွားတဲ့အရာတွေပါနော် New Skin တစ်ထုပ်လေးပဲစမ်းသုံးပီး ပျောက်လည်းမပျောက်ဘူး ထင်နေမှာစိုးလို့ ပြောပြတာပါနော်😁😁 စမ်းလိမ်းကြည့်ချင်သူများအတွက် New Skin 5g- 3500 ks ပါ အထုပ်လိမ်းပီးဗူးကြိုက်သူများအတွက် Snail Wish 50g- 29500 ks ပါ မှာယူလိုပါက cb (or) ☎️☎️09402756272 သို့ ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင့်
First Page « 184 185 186 » Last Page